Luxurylọ nkwari akụ ndị mara mma. Ndepụta nke ime ụlọ iri kachasị ọnụ na ụwa | Akụkọ Njem
Luxurylọ nkwari akụ ndị mara mma. Ndepụta nke ime ụlọ 10 kachasị ọnụ n'ụwa
eTravel | | ulo
Pọtụfoliyo Portal. com edepụtara, n'usoro ịrị elu, na ụlọ iri kachasị ọnụ na ụwa ma kọọ na France, United States, United Arab Emirates ma ọ bụ Gris nwere ndị ọbịa kachasị mma n'ụwa na ụfọdụ n'ime isi obodo ha.
Onu ogugu sitere na $ 15.000 rue $ 50.000 kwa abali, gunyere ime ulo ndi nwere ihe ndi ohuru ma obu ihe ndi mbu nke ndi Victorian ma mejuputa otutu ndi mmadu choro na ndi choro nwere ike iju ha n'oge obula.
Nke a bụ ndepụta nke nnukwu ụlọ oriri na nkwari akụ, ụfọdụ n'ime ha nwere 'kpakpando asaa':
10. Na Royal Suite nke nkwari akụ Park Hyatt nke Paris, 200 m2 na ilele Rue de la Paix, ọ na-efu 15.500 dollar n'abalị.
9. Na Royal Suite Imperial nke nkwari akụ Oge anọ George V, dịkwa na Paris, na arịa ụlọ na ihe osise esere na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, ị nwere ike ịrahụ site na 16.000 dollar
8. Na Suite Imperial na Itlọ Ritz, na Paris, bụ oyiri nke ime ụlọ na Obí nke Versailles nke Marie Antoinette, nwunye nke Louis nke Iri na Isii nke France, ọ na-efu 17.500 dollar ọnụ ọgụgụ dịkwa ka Shah nke Persia, Francis Scout Fitzgerald na Ernest Hemingway agafeela ya.
7. Na Royal Suite nke nkwari akụ Al Arab Bureau, na Dubai (United Arab Emirates), dị n'agwaetiti keakamere na ọ bụ naanị otu kpakpando asaa dị n'ụwa, ọ na-efu 18.000 dollar.
6. Onye Suite Onye isi ala na Zalọ nkwari akụ Plaza en New York (United States), nwere n'etiti ihe ndị ọzọ, ọnụ ụlọ ihi ụra asaa, ime ụlọ ịwụ isii, ọba akwụkwọ na ime ụlọ abụọ. Pricegwọ maka ịnọ abalị bụ 20.000 dollar.
5.ihe ndị ọzọ Akwa Suite na Atlantis, na Bahamas, nke Oprah Winfrey họpụtara na mbubreyo Michael Jackson, ọ dị n'àkwà mmiri nke jikọtara ụlọ elu abụọ nke naanị ụlọ nkwari akụ ahụ. Ọnụ 25.000 dollar n'abalị.
4. Na Ụlọ Royal Royal Site, na Onye isi oche Wilson Hotel, si Geneva (Switzerland), na ikike maka ndị ọbịa 40, na-anọ elu elu ụlọ nkwari akụ ahụ na ọnụahịa ya bụ 33.000 dollar.
3. Na Ty Warner Ụlọ ụlọ, nke Oge anọ na New York, ọ na-efu 34.000 dollar n'abalị ma na-agụnye Rolls Royce ma ọ bụ Maybach ị ga-agagharị na obodo ahụ na onye enyemaka onwe onye 24 awa kwa ụbọchị.
2. Na Hugh Hefner Sky Villa, na Ebe nkwụ Casino nkwụ, Las Vegas (United States), nwere akwa na-agbanwe ogo 360 na-ele obodo anya, jacuzzi nke na-efu $ 700.000 na nnọkọ nzuzo nke nwere Play bunnies Play Boy. Nke a na-efu naanị 40.000 dollar n'abalị.
1. Na Royal Villan'ime Grand Resort Lagosini na Athens (Gris) ọ nọ n'ọnọdụ mbụ. Lọ a maka ndị ọgaranya nwere ọtụtụ uru na ọ ga-adị ogologo oge iji depụta, zuru ya iji kwuo na ị ga-arahụ ebe ahụ, ị ​​ga-enwerịrị 50.000 dollar.
Foto: Las Vegas-Ndụ nke okomoko
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » ulo » Luxurylọ nkwari akụ ndị mara mma. Ndepụta nke ime ụlọ 10 kachasị ọnụ n'ụwa